FAMPISEHOANA - Ho Avy hanatanteraka ny Adidiny ao Paris i Fafah (Mahaleo) amin'ny 20 jona 2014.
Hamita ny adidiny aty Paris i Fafah (Mahaleo) amin'ny 20 jona ho avy izao, ao amin'ny Espace Mahery, manomboka amin'ny 8:30 hariva.
Ny vola rehetra ho azo amin'izany dia hanampiana ny mpikarakara Harendrina 2014 eto Paris, ary koa ho fandraisan’anjara amin’ny tolo-tanana ho an'i Nônô (Mahaleo).
Fandriho dieny izao ary raha ho avy ianao satria voafetra ny toerana.
Antsoy ny 06 12 12 66 01 na ny 06 51 89 91 99
Hisy “grillades” sy tsakitsaky eny an-toerana, ary tsy hifarana ny lanonana raha tsy maraina ny andro. Aorian'ny fampisehoana "acoustique" hataon'i Fafah dia hisy “animation” hataon'ny DJ MISTER MAN de Nancy.
Tongava maro ary fa fampisehoana tokana no hataon'i Fafah eto Paris amin'ity indray mitoraka ity.